गगन र विश्वप्रकाशलाई कार्यकर्ताले घेरे, मिलेर जान दवाव ! – SamajKhabar.com
गगन र विश्वप्रकाशलाई कार्यकर्ताले घेरे, मिलेर जान दवाव !
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:००
काठमाडौं । गत सोमबार नेपाली कांग्रेसका पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र शर्मा एवं नेविसंघ सहमहामन्त्री साधना घिमिरेको बिहेको भोज भद्रकालीस्थित आर्मी अफिर्सस क्लबमा भइरहेको थियो । अधिकांश कांग्रेस नेता र कार्यकर्ता निम्तालु रहेको भोजमा सबै आ–आफ्नै पारामा ‘इन्ज्वाय’ गर्दै थिए ।
यत्तिकैमा कांग्रेस नेता गगन थापा भोजमा प्रवेश गर्छन् । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा खरो वक्तव्य दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेकोले कांग्रेसवृत्तमा गगन चर्चामा थिए । भोजका अधिकांश सहभागिहरुले गगनलाई भेट्दै प्रभावकारी वक्तव्यका लागि धन्यवाद भने । केहीबेर गगन कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नजिकै पुगे । यत्तिकैमा दुवै नेता धेरै शुभचिन्तकहरुद्वारा घेरिए । कांग्रेस युवा नेता टेकराज पौडेल लगायतका नेताहरु पनि त्यहि थिए ।
अधिकांशले गगनलाई संसदको वक्तव्यका लागि धन्यवाद भने । गगनले सो वक्तव्यपछि आफूले धेरै ‘रेस्पोन्स’ पाएको बताए । अधिकांशले भोजमै गगन र विश्वप्रकाशलाई एकजुट हुन र पार्टीको सुधार गर्न आग्रह गरे । गगन र विश्वप्रकाश मिलेर अघि बढे कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने धेरैको सुझाव थियो ।
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:०० मा प्रकाशित